खुसीको खबर : अब बैंकबाट यसरि पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण ! - Nepali in Australia
May 11, 2021 autherLeaveaComment on खुसीको खबर : अब बैंकबाट यसरि पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण !
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋणकाठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ ।